Air xilkii guddoomiyenimo Apple, Airpod Makarafoonnada-, Airpods Bluetooth - Yimi
Portable Bluetooth Guddoomiyaha
Bannaanka Bluetooth Guddoomiyaha
Biyuhu Bluetooth Guddoomiyaha
Fabric Bluetooth Guddoomiyaha
LED Bluetooth Guddoomiyaha
Xayaysiis Power Bank
Capacity High Power Bank
MAXAA Bluetooth AFHAYEENKA ah waxa ugu wanaagsan EE SPORT
Loogu talagalay music in aad guuro
Waan ognahay waxa sports ka dhigan tahay in aad -Climbing nolol maalmeedka iyo cayaaraha kale waxay noqon kartaa hab fiican si aad u hagaajisid taam, wanaajiyo isku kalsooni iyo lumiyaan miisaan badan. Oo waxaynu og nahay waxa music waxay ka dhigan tahay, sidoo kale. music The hortagtaa daalka iyo kaabadaha ka baxsan Wareersan in ay sii aad diirada. laxanka ah in shidaalka aad isboortiga. Tanna waa sababta keentay abuuro afhayeenka fiican wireless waa hamiday.
Waxaan la qorsheeyo Gudoomiyaha Bluetooth si ay u milmaan mooshin iyo music, maxaa yeelay, waxay si fiican u wada tahay. Nooca ugu doorbiday ee ku hadla waa ku hadla wireless kaas oo ay leeyihiin wax badan oo faa'iido. Maxay noqon kartaa khayr badan fuulid raaxo leh ama ordo? Tani waa waxa aad yeelan doontaa marka ma jiraan fiilooyinka iyo fiilooyin tangling ee jidhkaaga. Iyada oo aad ciyaaro music jecel, shaqadaada ka soo helo u xiiso badan oo aad u daran. Waxaa jira xitaa qaylada baajinta ku hadla Bluetooth iyo qaadan hadla in aad isku dayi kartaa halka kedis ah ama ordaya.
Gudoomiyaha Bluetooth badan ayaa xitaa si gaar ah loogu talagalay isticmaalka taam, isufaan dhididka awdidu, qafiska Patriots, iyo batariyo gudaha in xitaa outlast ku rabtay ugu waalan.
KU SAABSAN YIMI warshadaha XADDIDAN
YIMI Industrial Limited aasaasay 2009 in Shenzhen, Shiinaha iyo inta ay soo saaraan waxyaabaha elektarooniga ah oo ay ku jiraan Guddoomiyaha Bluetooth & bangi awood. YIMI dhaqmayso bixinta adeegyada iyo alaabta oo tayo sare leh oo loogu talagalay macaamiisha ku salaysan ay Price mabda'a Tayada Premium oo macquul ah, si ay u sii macaamiisha ay haysato qiimaha keenay by waxyaabaha our.
Daawooyin badan in aan soo saaro waxaa loogu talagalay by our R & D kooxda. naqshado iyo fursadaha kala duwan oo lagu horumariyo ku salaysan suuqa baahida / codsiyada. Waxaan sii wadi doonaa in ay riixaan xuduudaha!
In dunida ka buuxa-caadiga ah sub jaban dhigay ku hadla wireless, waxaana naga go'an inaan tayo leh. Waxaan si adag u shaqeeyey si aad u ogaato hababka ugu fiican ee ay u bixiyaan macaamiisheena dhawaaqa awoodi ugu sareeya & codka rikoodh qumman iyo xal macquul ah isku celceliyaan oo aan ku allabaryaya tayada adeegyada our.
geeddi socodka Our caawin dhiibin macaamiisheena adeega ka xoogbadan, consistentand. Waxaan had iyo jeer raadiyaan xal iyo in la hubiyo qofna ka baxo niyad.
Waxaan si dhab ah ujeedadoodu tahay in la abuuro wax soo saarka oo aad u jeclaan doonaa
Gudoomiyaha Bluetooth midabka la yaabtid
Abuuritaanka alkumay kaamil ah u baahan yahay laba cunsur muhiim ah - nalalka xaq iyo music wacan.
Waxaan ciyaari ugu wanaagsan ee ku hadla Bluetooth LED Misbaaxyo in la abuuro 360 lightshow ° a iyo samatabbixin tayada codka fiican waqti isku mid ah. Ku hadla Kuwanu waxay leeyihiin LED nalalka wareegga in midabo kala duwan, oo fiiriyaa runtii cajiib ah - ay fiican ee dhinacyada dibadda, kulannada iyo safarada baadiyaha halkaas oo aad saaxiibadaa iyo qoyskaaga dhegaysan kartaa music oo wuxuu ku raaxaysan dhisneyn ciyaarihii fiicnaa ee LED sidoo yihiin.
Intaas waxaa sii dheer , afhayeenka wuxuu la iman doonaa shaqada bangiga awooda in ay nolol wax badan ka sahlan aad loogu talagalay.
Display LED 10000mah bangi awood
design Slim & iminka in aad soo socota meel kastoo aad tagtidba
taam Secure dhisay ciyaartoyda.
Gudbinta dhawaaq weyn in dhaxyada saaray iyada oo rabtay aad ugu adag.
Rabto inaad ka shaqayso WITH US
Nanchang ee First Industrial Area, Gushu Xixiang, Degmada Baoan, Shenzhen, Shiinaha
Iphone Power Bank, Mobile Power Bank, Reviews Bluetooth Guddoomiyaha, Fast ka faaiidaysta Power Bank, Bluetooth Guddoomiyaha Waayo, Car, Guddoomiye ku Big Bluetooth,